Qaadacaadda Faransiiska: Dalka afraad ee ugu Muslimiinta badan dunida oo dibadbaxyo ka dhaceen | Xaysimo
Home War Qaadacaadda Faransiiska: Dalka afraad ee ugu Muslimiinta badan dunida oo dibadbaxyo ka...
Qaadacaadda Faransiiska: Dalka afraad ee ugu Muslimiinta badan dunida oo dibadbaxyo ka dhaceen
Hogaamiyaha Chechnya Ramzan Kadyrov ayaa ku eedeeyay Mr Macron inuu kicinayo muslimiinta, asaga oo sheegay in madaxweynaha faransiiska asaga laftiisu uu umuuqdo argagixiso.
Ra’iisul wasaaraha Pakistan Imran Khan ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka Axadii ku eedeeyay madaxweynaha Faransiiska inuu “weerarayo diinta Islaamka”, halka wax soo saarka Faransiiska laga saaray dukaamada qaar ee Kuwait, Urdun iyo Qadar. Waxa kale oo mudaharaadyo ka dhaceen dhawr wadan oo kale oo ay ka mid yihiin Ciraaq, Libya iyo Syria.
Si kastaba ha noqotee, hoggaamiyeyaasha Yurub ayaa muujiyay taageerada ay u hayaan Faransiiska. Jarmalka wuxuu ka hadlay in “midnimo” loo muujiyo Mr Macron kadib hadaladii Mr Erdogan, iyadoo afhayeenka dowlada Steffen Seibert uu ku tilmaamay hadaladaas kuwo sumcad dil ah sidoo kalana aan “gabi ahaanba aan la aqbali karin”.
Dhanka kale Raiisel wasaaraha Holland Mark Rutte ayaa sheegay in Netherlands ay “si adag u garab taagan tahay Faransiiska iyo qiyamka wadajirka ah ee Midowga Yurub”, halka Ra’iisul Wasaaraha Talyaaniga Giuseppe Conte uu isna “midnimo buuxda” u muujiyay Mr Macron.